Ingabe Ufuna Ukungafaki I-Traffic Yangaphakathi Evela ku-Google Analytics? Uchwepheshe we-Semalt Ukhuluma kanjani
Ukuthengiswa kwe-intanethi, ukuthola ukuthengwa kwezivakashi ngokuqhubekayo kuwumgomo wabo bonke abathengisi. Noma kunjalo, akuzona zonke izihambeli ezingabalwa njengezaklayenti. Ezimweni eziningi, abasebenzi bakho noma ezinye izinhlangano zingase zithinte iseva ngezinhloso ezithile. Kulokhu, ungase ufune ukususa ukuvakasha kwabasebenzi kusuka ohlelweni lwakho. Lezi zivakashi zivame ukwakha ezinye zezinto ezisetshenziswa kakhulu kuwebhusayithi. Ukuqedwa okufanele kwabasebenzi abavakashela izibalo zakho kungathuthukisa ukunemba kwemiphumela ye-analytics kanye nokuveza isithombe sangempela sohlobo lwemoto le website ehehayo.
U-Andrew Dyhan, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , unikeza kulesi sihloko ezinye izeluleko eziphoqayo kulokhu.
Ulwazi olufanele ngekheli le-IP
Uma izivakashi zichofoza i-URL yesayithi lakho, iseva ibonisa ukuvakashelwa ngalunye ngekheli eliyingqayizivele le-IP. Ikheli le-IP limelela indlela isiphequluli esithola ngayo iseva ixhuma. Ngokwesibonelo, ikheli le-IP lomsebenzisi wekhompyutha, ithebhulethi, ideskithophu nanoma iyiphi enye idivayisi. Kwamanye amacala, i-SEO bots evela ku-Google iphinda isebenzise lawa makheli we-IP ukwenza ngokuqondile ukukhomba kwabo. Abaqaphi bangasebenzisa futhi amakheli e-IP ukuze bahlose ukuhlasela kwabo kwe-malware ne-virus.
Noma kunjalo, uma abasebenzisi bencike eminye indlela yokuxhumeka kwe-inthanethi, ikheli le-IP lingase liguquke. Ngokwesibonelo, ukusakaza okuhamba phambili kweselula, kanye namabhokisi omzila wendabuko, aqukethe ikheli le-IP eliqhubeka lishintsha. ukucacisa nokususa i-traffic yakho yangaphakathi, kubalulekile ukuthola futhi ukuhlukanisa nezinye izivakashi. Kubalulekile ukuthola ikheli le-IP static lendawo lomsebenzisi ku-Google Analytics.
Akubandakanyi ikheli le-IP
Kubalulekile ukuthola ikheli le-IP lomsebenzisi ngaphambi kokuqhubeka. Ukusesha kwe-Google okulula kokuthi "yiyiphi ikheli lami le-IP" kungenza i-Google ikunike ikheli lakho le-IP. Ikheli le-IP libonisa indawo lapho umsebenzisi efinyelela khona ku-intanethi. Ukukhipha ikheli elilodwa le-IP, ungena ku-panel yakho ye-Google Analytics admin. Kusukela phezulu kwekhasi, chofoza inkinobho yokuhlunga. Kusuka lapha, kungenzeka ukuhlunga igama, indawo noma amakheli e-IP kusuka emotweni yamanje.
Ikheli le-IP lihlale libonakala njengezinombolo zamadijithi amathathu no-4 ahlukaniswe iphuzu lesimanje. Gcina intuthuko yesinyathelo ngasinye. Uma unezinye izindawo eziningi zekheli le-IP, zihlukanise ezindaweni eziphinda ngokuphinda inqubo engenhla. Kungenzeka ukuzenzekela ukuvimbela amanye amakheli we-IP ku-Google Analytics. Emenyu yokuhlunga entsha, kungenzeka ukuba wenze isihlungi esijwayelekile ngaphandle kwamanye amagatsha oyikhethayo. Uma ulungisa lezi zilungiselelo, kubalulekile ukukhumbula ukugcina inqubekela phambili.
Ukungafani namanye amakheli we-IP kusuka emotweni yakho kungaba yindlela ebalulekile yokugxila ezithameli zakho. Ngeke nje ukuletha isithombe esicacile ekuguqulweni kodwa futhi kusize abantu bathole izindlela ezihlukile zokufinyelela kwamanye amaklayenti. Kungenzeka ukufezekisa i-geo-targeting usebenzisa amakheli e-IP yomsebenzisi. Kwezinye izimo, abagaxekile bavame ukusakaza i-malware ngamakheli e-IP. Ukuhlukanisa abasebenzi bezimoto ezivela kwezinye izivakashi kungasiza i-website ye-e-commerce ukuthi ingashiyi amagciwane.